pittsburgh - Synonyms of pittsburgh | Antonyms of pittsburgh | Definition of pittsburgh | Example of pittsburgh | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for pittsburgh
Top 30 analogous words or synonyms for pittsburgh
Alaska Thunderfuck University of Pittsburghတက္ကသိုလ်မှပြဇာတ်ရုံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူမသည် အကိုဖြစ်သူ Cory Binney နှင့်အတူ World of Wonder Web Series, Bro'Laska တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အစ်မ Brooke နှင့် ညီ Ryan လည်းရှိပါတယ်။.
ညစ်ညမ်းဓါတ်ငွေ့လျှော့ချရေး နိုင်ငံတာကာစာချုပ်များ အောက်တိုဘာလ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒိုနိုရာမြို့ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မိုနွန်ဂါဟီလာမြစ် ချိုင့်ဝှမ်းအတွင်းပိုင်း တောင်ဘက် Pittsburgh မှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ အငွေ့တွေ ပါတဲ့ သိပ်သည်းလွန်းတဲ့ မြူဆိုင်အမှုန်အခဲတွေဟာ ၅ ရက်လောက်ကြာအောင် ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ၁၄,၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ လူဦးရေထဲက ၇၀၀၀ ကျော်လောက်ဟာ အဲဒီညစ်ညမ်းလွန်းတဲ့ သိပ်သည်းစွာရှိနေတဲ့ မြူမှုန်တွေကြောင့် ဖျားနာခဲ့ရပါတယ်။ လူ ၂၂ ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
Math rock Pittsburgh မြို့မှ Don Caballero တီးဝိုင်းမှ drummer Damon Cheသည် နိုင်ငံတကာ math rock တီးဝိုင်း Belliniနှင့် Black Moth Super Rainbow, Tabula Rasaနှင့် Knot Feeder တို့နှင့်ပါဝင်ခဲ့သည်။ Washington, D.C တီးဝိုင်းများမှ The Dismemberment Plan, Shudder to think, Hoover, Faraquet, 1.6 Band, Autoclave တို့ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Jawbox နှင့် Circus lupus တို့လည်းပါဝင်သည်။ Breadwinner တီးဝိုင်းသည် Fulfejနှင့် Lamb of God. Polvo တို့သည်
Crust punk အရေးပါသော အမေရိကန် crust punk တီးဝိုင်းမှာ Pittsburgh, Pennsylvania မှ Aus Rotten ဖြစ်သည်။ crust punkသည် Minneapolis တွင်လည်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ Profane Existence ဖြင့်လမ်းပြခဲ့သည်။ ထိုအချိန်အတောအတွင်းတွင် crust punk အုပ်စုသည် သက်သက်လွတ်စားခြင်းနှင့် ယောက်ျားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရယူလိုသော အမျိုးသမီးဝါဒကို ပြဠန်းခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်ဖြင့် straight power violence အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ crust punk သို့ နီးစပ်စေခဲ့သည်။ crust သည် Prank records နှင့် Crimethinc ရှိသော လူသိများသော ကိုယ်စားလှယ်မှာ His Hero is Gone တီးဝိုင်းဖြစ်သည်။ အရေးပါသော crust punk အုပ်စုများမှာ ဆွီဒင်မှ Driller, Killer, Totalitar, Skitsystem, Wolfbrigade နှင့် Disfear တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်စုများသည် Scandinavian death metal ဖြစ်ရပ်နှင့်အတူ မျဉ်းပြိုင်ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။